I-Maison de Manon, Izinyathelo Eziya Emotweni Yomgwaqo
(68 okushiwo abanye)
New Orleans, Louisiana, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Kelly
I-Mid-City Elegant, engaphezu kwekhulu ubudala, yalungiswa futhi yabuyiselwa ekhaya ku-Lafitte Greenway yomlando. Inophahla oluphezulu, amakhabethe okungena, itafula lokudlela/indawo enkulu (izihlalo ezingu-10) kanye nekhishi eligcwele. Inemibhede yezindlovukazi emi-3, indawo yokulala usofa abayindlovukazi, i-futon eyanele yesikhumba kanye ne-twin size. Kukhona igceke elibiyelwe elizimele elinegrill yegesi kanye nesethi yokudlela yangaphandle. Ukuqashwa kahle kwamaqembu amakhulu ukuze ujabulele imicimbi yasendaweni eyintandokazi, i-Jazz Fest, i-Voodoo Fest, i-Bayou Bogaloo, i-Mardi Gras nokuningi.
UDINGA ISIKHALA ESENGEZIWE? Buza ngendlu yakwamakhelwane!
Inemibhede yezindlovukazi emi-3, indawo yokulala usofa abayindlovukazi, i-futon eyanele yesikhumba kanye ne-twin size. Kukhona igceke elibiyelwe elizimele elinegrill yegesi kanye nesethi yokudlela yangaphandle.
Iwasha / isomisi iyatholakala kanye nezindawo zokupaka ezi-2 ku-driveway.
Ibuyekezelwe indlela yokuphila yanamuhla nokunethezeka kodwa igcine ubuntu bakhe bomlando nezakhiwo.
Igumbi lokulala 1 - umbhede wendlovukazi
Igumbi lokulala 2 - linemibhede eyindlovukazi emi-2
I-queen sofa sleeper, indwangu ye-futon tweed kanye ne-twin size pullout.
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 2 imibhede yosofa
4.91(68 okushiwo abanye)
4.91 · 68 okushiwo abanye
Izinyathelo nje ukusuka ku-Canal St. streetcar (uhambo lwamaminithi angu-15 ukuya e-French Quarter) . Ukuhamba ibanga lokuya ezindaweni zokudlela eziningi ezidumile nezindawo ezithandwayo zomculo, izindawo zomculo, amabha endawo, nemikhosi (Jazz Fest, Voodoo Fest, Bayou Bogaloo, kanye nomzila we-Endymion Mari Gras). Amabhulokhi amabili ukusuka e-Bayou St. John, okuqashiswa i-Blue Bike kanye nomzila wamabhayisikili, eduze kwase-City Park, e-NOMA, i-Sculpture And Botanical Gardens. Kokubili i-Bayou Wine kanye ne-Beer Gardens nazo zingamabhulokhi ama-2 kuphela.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami 24/7. Ukungithumelela umyalezo kuzothola impendulo esheshayo futhi umgomo wami uwukubhekelela zonke izidingo zakho noma imibuzo!
Inombolo yepholisi: 20-CSTR-33477, 20-OSTR-33473
Hlola ezinye izinketho ezise- New Orleans namaphethelo